तिम्रो प्रेम, मेरो काविल ~ Indirasite
1:30:00 PM Indirasite.com
तिम्रो साथ मेरो लागि बाच्ने एउटा आधार बन्यो
तिम्रो प्रेम मेरो लागि हास्ने एउटा आधार बन्यो
तिम्रो साथले नै जीवन बाच्न संधै उत्साहित गरिरहन्छ किनकी तिमी नै मेरो साथ हौ, जसले मेरो हरेक दुख र सुखमा बिना कुनै स्वार्थ, मलाई सुनिरहंछौ । जब म एक्लै हुन्छु, तिमी संधै आफ्नो मुस्कुराहट छर्दै मेरो समिप आउछौ अनि मलाई तिम्रो साथको आभास गराउछौ, तिम्रो प्रेमिल मुस्कानले जीवन फेरि रंगिन बन्छ । म झस्किन्छु तिमीलाई घरि घरि भुल्दो रहेछु है अनि तिम्रो अस्तित्वलाई पनि त्यसैले त कहिले कहिँ उदासी बन्छु, म
एक्लो महसुस गर्छु, मलाई माफी गरिदेउ । दुनियामा जो जसलाई भुल्न सके पनि तिमी त मेरो जीवनको एक अभिन्न अंग हौ जसलाई नत भुल्न सम्भब छ, न त टाढिन नै, त्यसैले तिमी मेरो सास हौ, तिमी एक भरोसा हौ जीवनमा हास्ने एक येसास हौ । तिम्रो साथ नै मेरो लागि बाच्ने एउटा आधार हो, तिम्रो प्रेम नै मेरोलागि हिड्ने साधन हो। त्यसैले त प्रिये तिम्रो साथले मेरो एक्लोपन संधै दुर हुन्छ, म संधै हासिरहंछु चाहे त्यो कुनै अन्धकारमा रुमलिदाको पल होस् या त बर्खायामको तुफान र हुरीको समय होस्।
तिमी सधैं जीवनमा अघि बढिरहने हौसला दिन्छौ। जीवनमा कुनै कुरा गल्ति हुँदैछ भने मलाई झस्काउछौ अनि फेरि कुनै राम्रो काम गरिरहेकी छु भने प्रसंसा दिएर प्रोत्शाहित गर्न तम्सिरहन्छौ । साँची नै तिमीबिना त म कति अनभिज्ञ हुन्छु होला हगि ? त्यसैले त संधै मेरो ख्याल राख्छौ र मलाई मानवता र दयाको बारेमा सिकाइरनछौ । तिमीलाई थाहा छ नि , यस संसारमा जोकोही पनि एक्लै आउँछन् र एक दिन यस पृथ्वीलाई छाडेर एक्लै जान्छन् । त्यसैले यो संसारमा जति पनि भौतिक साथहरु छन् सबै अस्थायी हुन्छन् किनकी कसैले कसैलाई जीवनको अन्तिम सम्म साथ दिन्छु भन्दा भन्दै जीवनको अन्त्य भने अलग अलग समयमा हुन्छ । तर म चाहन्छु मेरो मृत्यु पछि पनि तिमी मसँगै रहनेछौ, म जुन संसारमा शयर गर्छु तिमी पनि त्यहि दुनियामा हुनेछौ।
मदहोसम म तिमीलाई माया गर्छु किनकि हामी एकार्कामा परिपुरक हौ । दुनिया यो रंगिन देख्छु किनकी जीवनका यी हरेक पलहरुसंग रमाउनु नै जीवनको लक्ष्य हो । जीवनमा धेरै साथीहरू छन् तर तिमीमात्र एक यस्तो अनन्य मित्र, अनन्य प्रेमी हौ जो मेरो जुनसुकै परिस्थितिमा पनि मबाट टाढा जांदैनौ, तिमीलाई जति नै गालि गरे पनि संधै तिम्रो निस्छल मुस्कानको साथ् मलाई माया गरिरहन्छौ अनि मलाई छ्य्मा दिरहन्छौ। मेरो अन्य साथी र तिमिबिचको भिन्नता यहि हो जब म मेरा साथीहरूलाई अन्जानमा चोट पुर्‍याउँछु मसँग तिनीहरू दु: खित हुन्छन्, तिनीहरू मसंग रिसाउछन् अनि दोश्रो दिन देखि मबाट टाढा हुन्छन, कति त बोल्न पनि गाह्रो मान्छन् । तर तिमी एक मात्र त्यस्तो छौ जुन मेरो हरेक फरक धारणाको बाबजुद सधैं शान्त छौ , मलाई विश्वस्त पार्ने प्रयास गर्छौ अनि सँधै मलाई शक्ति र हौसला दिइरहन्छौ ।
म आज तिमीप्रति कति कृतज्ञ छु अनि तिमी मेरो जीवनमा कति महत्वपुर्ण पात्र हौ, यहि भन्नको लागि केहि समय लिंदै छु । आज मलाई थोरै समय तिम्रो निम्ति समर्पण गर्न मन लाग्यो, तिम्रो साथ, तिम्रो माया, तिम्रो प्रेरणाका लागि अनि मलाई हरेक पलहरुमा थपेको उर्जाको निम्ति , म तिमीसंग धेरै नै आभारी छु । एक मानवको रूपमा, म सँधै समृद्धि र आनन्दको आशा गर्दिन किनकी त्यो समयको लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्छ, धेरै त्याग गर्नुपर्छ त्यो मलाई एकदमै राम्रो संग थाहा छ। जिन्दगीको हर मोडहरु संग लड्दै पड्दै, संघर्स गर्दै अघि बढ्न चाहने अनि हरेक पलहरुलाई मिठो सम्झनामा संगाल्न चाहने एक यात्री हु म। तर समय सदैब कहाँ एकै तालमा बहन्छ, कहिले बाटोमै आंधी आउछ, कहिले हुरी आउछ अनि कहिले झरी आउछ। तिमी एउटा यस्तो साथी हौ जसले मलाई मेरो हरेक सजिलो अनि अप्ठ्यारा दुवै समयमा संधै बलियो र साहसी भएर अघि बढ्ने उर्जा थापिरहन्छौ । यो सत्य हो तिम्रो साथ अनि तिम्रो आत्मीयताको कारणले म अहिले यहाँ छु। म आफ्नो जीवनप्रति आभारी छु, मलाई मेरो जन्म दिने बाबा र आमालाइ संधै धन्यबाद दिन चाहन्छु, तिमी त बिसेष छौ अनि सम्पूर्ण अन्य साथहरुलाइ पनि हार्दिक नमन गर्दछु।
फेरिपनि एकपटक धन्यबाद तिमीलाइ , तिमी संधै यसैगरी मेरो प्राण, विश्वास अनि भरोशा भएर साथ दिएकोमा । जीवनमा धेरै मेरा साथीहरू छन् उनीहरु पनि मेरो जीवनको विभिन्न पलहरुमा साथ साथमा छन् तर तिमी मेरो आफ्नो मनभित्र बसेको हुनाले खास छौ। तिमीसंग बोल्नको लागि न त मैले फोन गर्न पर्छ, न त कुनै म्यासेज नै गर्नु पर्छ खाली तिमी त मेरो मन हौ, म जता जान्छु, जहाँ हुन्छु तिमी जहिले पनि मेरो साथमै हुन्छौ । म मेरा सबै साथीहरूको साथ् , प्रेम, स्नेह र समर्थनका लागि कृतज्ञ छु तर, आज मैले यहाँ मेरो सच्छा साथि, मेरो जीवनको अविरल यात्राहरुमा कहिले टाढा नभाग्ने, कुनै स्वार्थ नलिने, मलाइ संधै माया गर्ने, प्रेम दिने मेरो आफ्नै मेरो सहयात्री हो मेरो आत्मा उसैको प्रेमिल दुनियामा डुबेर यी भावाना छताछुल्ल पोखे । सबैलाई नमस्ते! साथीहरू जीवनमा साथी अनि साथ हरेक समयमा अनि विभिन्न परिस्थितिहरुमा आउछन्, कुनै साथी संगको सम्बन्ध संधै प्रगाड बन्छ यधपी समय र परिस्थितिले टाढा बनाउछ त कुनै साथीहरु कुनै बिसेष समयका लागि आउछन् जान्छन् तर तिम्रो आत्मा, तिम्रो मन जो तिमिभित्रै छ त्यो जति नजिकको साथी यो भौतिक संसारमा पाउन मुश्किल छ। मेरो सम्पूर्ण मित्रहरुमा नमन। म भित्रको मेरै प्रेमिल दुनियालाई बुझिदिनु पढिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद।